Nhengo Zhinji dzeMDC Dzinobuditswa Muhusungwa
Kubvumbi 29, 2008
Nhengo zhinji dzeMDC dzakasungwa pamuzinda webato iri, paHaverst House, nemusi weChishanu, dzaburitswa muhusungwa pasina mhosva yadzapomerwa. Nhengo idzi dzinoti dzanzi nemapurisa dzisiyane nebato re MDC.
Mutori wenhau weStudio 7, Irwin Chifera anotipa nyaya inotevera.
Zvichakadaro vatungamiri veZESN vaenda zvakare neChipiri kumapurisa, uko vari kubvunzurudzwa pamusoro penyaya iri kuferefetwa nehurumende yekuti sangano iri ranga richishanda pamwe chete neMDC nechinangwa chekubiridzira sarudzo dzemuna Kurume.
Asi mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vati bato ravo harina ruzivo nezvegwaro riri kushandiswa nemapurisa panyaya iyi, iro riri kunzi rakanyorwa nemunyori weMDC, VaTendai Biti.
Nyaya yegwaro iri, yatova mumaoko emagweta, ayo akayambira bepanhau reHerald, nevose vachashandisa gwaro iri kuti vachaonekwa vaine mhosva, sezvo bato ravo risina chekuita negwaro iri. VaChamisa, vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kungotsvaga nzira dzekushungurudza bato ravo nemasangano akaita seZESN, uye vati havana kumboshanda vose nesangano iri.
Carole Gombakomba weStudio7 aita hurukuro nasachigaro weZESN, VaNoel Kututwa, kuti tinzwe kuti zvafamba sei kumapurisa kwavadeedzwa.